Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxii London Filimkan ku daawo: Fadeexadi Gumeysiga iyo doorka Wadaniyiinta Ogadeniya ee UK
Fiilmki banaanbaxa Hoos Ka daawo:
Fadeexadi ka raacday Gumeysiga Safaarada gumeysiga ee london. Waxaa lagu xasuusta qabow badan iyo roob iyada oo da’ayo in Wadaniyiinta jecel xoriyada dhulkooda Hooyo inay fashiliyeen shirki gumeysiga oo markii danbe isugu biyo shubtay in Xawaladaha Somaliyeed ee lacagta umada Somaliyeed ku dirsato in xoog lagu dhaco. Mase ogolaan doonaan xawaladuhu.
Waxa kale oo xasuus mudan dad kamid ah dadkii u galay gumeysiga inay watteen warqado Petition ah oo lagu dacweynayo Gumeysiga laftigiisa. Taas oo argagax ku noqotay markii warqado safaarada dhexdeeda laga qeybiyay loo sheegayo in aysan rabin gumeysiga Ethiopia. dadkaas oo ahaa dadmarkii hore safiirka iyo ninka u adeega gumeysiga Cabdi UBO ay ku xisaabtamayeen.
Dadkii gumeysiga u shaqeynayay ayaa sidii Mas mal mal lagu shiday qaban la’ godkii iyo dibadi midnaba waxa ayna ku wareersanyihiin safaarada dhexdeeda iyaga oo qorsheystay filim lagasoo duubay Liyuu poliska inay ku dawadaan Albeerko halkaas oo ay qorsheysteen in si qarsoodi ah iyaga oo 10 neeyo qof ah ay ku daawadaan balse waa ay qarin kari wayeen qorshahi ay maaganayeen. oo iyaga isfashiliyay.
Hadaba Qabowgi shacabki Somalida Ogadeniya ee u dhabar adeegay Hoos ka daawo Filim kamid ah qeyb banaanbaxi ka dhacay London.